ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: မြန်မာ မင်းသမီး ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း Myanmar Attress Wine Su Khine Thein
ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဘားအံကနေ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျား..။ ဒီwebsite လေးထောင်ကိုရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျောင်းသူ-ကျောင်းသားတိုင်း အတွက် Engineer ပညာရပ်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လေ့လာနိုင်စေဖို့ အတွက်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ထောင်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ညီလေး-ညီမလေးတို့ပညာတတ်တွေဖြစ်ပြီး လူတော်-လူကောင်းလေးတွေ ဖြစ်ရင် ထောင်ရကျိုးနပ်ပါပြီ။(ကျော်ထက်ဝင်း-နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ) email: sawya.xx@gmail.com မှတ်ချက်။ ။ ဒီ website သည် ကျော်ထက်ဝင်း၏ တစ်ဦးတည်း မူပိုင် Website ဖြစ်သည်။
" But when along train of abuses and usurpations, pursing inviably the same object, evincesadesign to reduce them under absolute despotism , it is their right, it is their duty to throw of such their goverment and provide new guards for their fucture security."
မြန်မာ မင်းသမီး ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း Myanmar Attress Wine Su Khine Thein
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 6:34 AM
အခုလို လာရောက်အားပေးကြတာ အထူးပဲ ၀မ်းသာ ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဗျား ... ။ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ (ဘားအံ)
၀င်ရောက် ကြည့် ရှုသူ ဦးရေ
BAT File Format Lesson
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သမိုင်းများ စုစည်းမှု
အခြေခံ PLC Function များ
AC Induction Motor အကြောင်း
Heat Exchanger အကြောင်း
Chiller / Chilling အကြောင်း
Electrical Installation အကြောင်း
Clean Water & Clean Air
M&E Auto CAD ( Singapore )
Fire Protection အကြောင်း
Data Communication & Networking အကြောင်း
Computer Internet & E-Mail
Window Problem များ ဖြေရှင်းတဲ့ Software free download
Split Camera Software
Norton Disk Doctor Software free download
Photo-Joy-Install can show our sweet heart free download
Your Un-Installer Software
Passward ကို ခက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
MooO Disk Cleaner Software
What is Cryptography ?
Data Recovery Software လေးတစ်ခု
မြန်မာ Internet Connection အကြောင်း
BIOS Password ကို Remove လုပ်နည်း
IP Star Broadband Connection အကြောင်း
Splayer Media Player Software free download
Off-Line Website ထောင်နည်း
Cyberwindowns(Computer Hunters) အကြောင်း
THEME & ICON Software free download
Broadband Wireless Local Loop Connection အကြောင်း
fastcopy software photo movie editing software free download
Change YouTube to MP3 Software Free Downlaod
Commander Software Free Download
YouTube မှ Download လုပ်နည်း
TuneUp Ultilities 2011 software free download General software
နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျား .... ။
Archieve Tilte Post လုပ်နည်း
Wordpress Word Spelling Check လုပ်နည်း
Home Page Begin လုပ်နည်း
Content Warning ကို Remove လုပ်နည်း
မိမိ Blog မှာ နာရီ ထဲ့နည်း
Different Back Ground Image လုပ်နည်း
မိမိရဲ့Blog ကို ပိုမိုမြန်စေရန်
Blog မှာ Auto Read More ထဲ့နည်း
မိမိ Blog ကို Right Click ပိတ်နည်း
Mouse နောက်က အသဲနီနီလေးများ လုပ်နည်း
Mouse နောက်က ဘူးသီးလုံးဒလေးများ လုပ်နည်း
HTML Color Code လေးများ
မိမိ Blog မှာ အလှဆင်ရန်
AlphaZawgyi-Myanmar Uni-Code ၂-မျိုးလုံး Blog မှာထဲ့ရန်
HTML/Java Script ထဲ့နည်း
Website PHP အကြောင်း အခြေခံ
အလွယ်ကူဆုံး Blog ထူထောင်နည်း
Blog မှာ Scrolling List ထဲ့နည်း
အသုံးဝင်သော HTML java-Script Code လေးများ
မိမိရဲ့Blog မှာ အလွန်ရုပ်ဆိုးသော Nav-Bar ဖြုတ်နည်း
Drop Down Menu ထဲ့နည်း
Open Window New Tab ထဲ့နည်း
Blog Title နှင့် Link ချိတ်နည်းများ
အာဇာနည်နေ့အကြောင်း သမိုင်းအစုံ
ဘုရားပြီးရင် အကြည်ညိုဆုံးလူသား (ဗိုလ်ချုပ် ဂုဏ်ပြုကဗျာ)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဆိုတာ (အမှတ်တရ ကဗျာ)
ဗိုလ်ချုပ်မိခင် ဒေါ်စုရဲ့ရင်တွင်းစကားများ
မှတ်သားဖွယ်ရာကောင်းသော ဗိုလ်ချုပ် မိန့် ခွန်းများ
အာဇာနည်များရဲ့ဇျာပန (ဇူလိုင်၁၉)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အိမ်သို့(သို့ ) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ဇယား (ဆရာမင်းယုဝေ)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ဆရာ တပည့် ပိုက်ဆံမပါပဲ ပလာတာ အကြွေး ၀ယ်စားခဲ့ပုံ
ဗိုလ်ချုပ်ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည် အကြောင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ ရိုးသားမှုဂုဏ်
ပြည့်ဖခင် ( အမှတ်တရ ကဗျာ )
ဗိုလ်ချုပ် ဒေါသထွက်သောနေ့ 
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ အရည်အချင်းများ
စိတ်ထားမြင့်မြတ်သော ဗိုလ်ချုပ်ကတော် ဒေါ်ခင်ကြည် နှင့် မျိုးဆက်
လူထုငတ်ရင် အားလုံးငတ်မယ် ၊ လူထုဆင်းရဲရင် တို့ ရဲဘော် အားလုံး ဆင်းရဲမယ် ( ဗိုလ်ချုပ်မိန့် ခွန်း တစ်ခု )
၁၉၄၄ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့မင်္ဂလာဒုံ ဗိုလ်သင်တန်းဆင်းပွဲ မိန့် ခွန်းတစ်ခု
၁၉၄၇ ဇူလိုင် ၁၃ ရက်နေ့မြို့ တော်ခန်းမ နောက်ဆုံးမိန့် ခွန်း
လူညံ့စိတ်ကို ဖျောက်ပြီး နိုင်ငံရေးကို လိုက်စားလိုက်စမ်းပါ ( သခင်အောင်ဆန်း ရဲ့မိန့် ခွန်းတစ်ခု )
ဗမာ့အောင်ဆန်း ( မောင်ထင် )
အောင်ဆန်း (သို့ မဟုတ်) အရိုင်း (ဒဂုန်တာရာ)
တို့ ဗမာ အစည်းအရုံးခေတ်က သခင်အောင်ဆန်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့် ခွန်းတစ်ချို့ 
သခင်ဆိုတဲ့ ဘွဲ့ တစ်လုံး
သခင်အောင်ဆန်း တရား ( ဆရာဇော်ဂျီ )
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် သူ၏တပ်မှူးများ
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးမိန့် ခွန်းများ
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မှတ်သားဖွယ်မိန့် ခွန်းများ
အမှတ်တရ မိန့် ခွန်းလေး တစ်ခု
ဗိုလ်ချုပ်အတွေး - ဗိုလ်ချုပ်အမြင်
၁၉၄၄ မတ်လ ၁၃ မင်္ဂလာဒုံမိန့် ခွန်း
သဘောထားကြီးပြီး ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့ အောင်ဆန်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် နိုင်ငံရေး ဖိအား
ဗိုလ်ချုပ် နှင့် အမှတ်တရများ
ဇူလိုင် ၁၉ လုပ်ကြံမှုကြီး
ဗိုလ်ချုပ်ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည်၏ အမှာစကား
ဒို့ အဖိုး ဒို့ အဖေ ဒို့ ဗိုလ်ချုပ်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို တစ်ကယ်သတ်ကြတာ ဘယ်သူတွေလဲ
ဗိုလ်အောင်ဆန်း ကလေး ဘ၀
ဒို့ ဗမာ အစည်းအရုံးခေတ်က သခင်အောင်ဆန်း
ဗိုလ်ချုပ်မိန့် ခွန်းများ (Free Download)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သမိုင်း စုစည်းမှုများ
သမိုင်းထဲက နေ့ စွဲများ
၁၉၄၇ ဇူလိုင် ၁၉ ၀မ်းနဲကြေကွဲဖွယ်ရာ မှတ်တမ်း
အာဇာနည်နေ့မှ ပေးသော သင်္ခန်းစာများ
ပင်လုံစာချုပ် (သို့ ) ပင်လုံစိတ်ဓာတ် (သို့ ) အောင်ဆန်း-အက်တလီ စာချုပ်
ဖဆပလ ပင်လုံးကျွတ် ညီလာခံ မှ ဗိုလ်ချုပ်မိန့် ခွန်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့သမိုင်း နေ့ စွဲများ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့စွန့် လွှတ် အနစ်နာခံမှု စိတ်ဓာတ်
ဖခင်အောင်ဆန်း နှင့် သမီးအောင်ဆန်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြောင်း ၁-၂-၃
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် ဟင်္သာတ ခရီးစဉ်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ထံမှ ပေးစာတစ်စောင်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့စိတ်ကူး နှင့် လက်တွေ့ 
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သတ်တာဘယ်သူလဲ ၂
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်အချို့၂
၁၉၄၇ ဇူလိုင် ၁၉ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှု ၀မ်းနဲကြေကွဲဖွယ်ရာ မှတ်တမ်းများ
အောင်ဆန်း-အက်တလီ စာချုပ် (သို့ ) ပင်လုံစိတ်ဓာတ်
၁၂-၁-၁၉၄၆ ဖဆပလ ပင်လုံးကျွတ် ညီလာခံတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောသော မိန့် ခွန်းများ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ အာဇာနည် စိတ်ဓာတ်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရှားပါးမှတ်တမ်း စုစည်းမှု
သီးသန့် အမှတ်တရ မှတ်တမ်းများ သူငယ်ချင်းများနှင့်ဘားအံရေတံခွန် မေ့မရနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ ၂၀၁၀ B-Tech 2nd ဘွဲ့ ယူစဉ် မှတ်တမ်း ဇင်းကျိုက်ရေတံခွန် မှတ်တမ်း ဟိုတစ်ချိန်က ကြွေခဲ့ရသူလေး ဘားအံမြို့အလှတရားများ
လိမ္မာသည်ဆိုခြင်းမှာ... သူရဲဘောနည်းခြင်း၊ ကြောက်ခြင်း၊ သွေးမရှိခြင်း၊ သတ္တိမွဲခြင်း၊ ဒူးတုန်ခြင်း၊ တကိုယ်ကောင်းကြံခြင်း၊ အမေနှင့်ငါ မာလျှင်ပြီးရောဆိုသော စိတ်ရှိခြင်း၊ ကိုယ့်အိမ်မှ ကိုယ့်အိမ်မှတ်ခြင်း၊ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားတခုတည်းကိုသာကြည့်ခြင်း၊ ရှေ့ လာမည့်ဘေးကို စည်းလုံး၍ ခုခံရမှန်း မသိခြင်း ဖြစ်ပါမူ... အို...အချင်းတို့ငါတို့ သည် မလိမ္မာလိုပါပြီ၊ မိုက်သာ မိုက်လိုပါ၏၊ ငါတို့ အား မိုက်ခွင့်ကို ပြုကြပါကုန်၊ ငါတို့ မိုက်ပါရစေ။ ။ ( ဒို့ ဗမာ အစည်းအရုံး မှ သခင်လူငယ်တစ်စု တို့ ၏ ကျွေးကြော်သံ )
Flash Songs - ၁
ပြုံးလိုက်ပါ နှလုံးသားချင်းထိတွေ့ခဲ့တယ် ဖူးစာရှင် ဗုဒ္ဓမေတ္တာပန်း အိမ်မက်ရဲ့သမီးပျို မင်းမရှိတဲ့ကမ္ဘာ အလွမ်းသင့်ပန်းချီ ပျော်သလိုနေလိုက်တော့ စိတ်ကူးလွင်ပြင် အလွမ်းနိဂုံး မျှော်လင့်ခြင်းအဆုံး ဘ၀ရဲ့လမ်းများ နင်သိရဲ့လား အလွမ်းပြေအနမ်း၃ လရောင်ဆမ်းသောလမ်း တစ်ဖက်သက်အလွမ်း ဝေးပြီးတဲ့နောက် တစ်နေ့တော့ လမင်းသစ်ပင် ချစ်သူ နားနားဘေးမှာ ပျံသန်းသွားတော့ ဟုတ်လို့လား Never Be Replaced ချစ်မိနေပြီ နိုးတစ်ဝက်အချစ် အချစ်အတွက်ကိုယ်စား ငါ့ရဲ့အနား ၂ ဝေးသွားတဲ့အခါ မီးအိမ်ရှင် ငါ့နေရာ Anywhere for you Justin Bieber(Baby) သီရိသူ ဒီဇင်ဘာည ဒီဇင်ဘာည၂ ငါမှားလားမင်းမှန်လား ဆေးကျောင်းသား တကယ်ဆိုရင် အမေ စွန့်လွှတ်ခက်သူ နင်စေရင် အနှိုင်းမဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက အနိုင်မယူသူရဲ့အရှုံး ခိုးချစ်ရသူ နှလုံးသားအစီရင်ခံစာ ညီမလေးအတွက် မိုး(မျိုးကြီး) မိုး၂(မျိုးကြီး) ( 8.4 ) ချစ်တယ်ဟုတ် ကောင်မလေးတယောက်အကြောင်း ဖက်ထားမယ် LetMeKissU ချယ်ရီသက်သေ ဖိတ်စာ နွေအလွမ်း ယူလိုက် အဖေ့မေတ္တာ လက်ခံပေးပါ(မျိုးကြီး) HaHaLaGyiAh မမ အပျိုကြီး ညီမလေး SnowQueen လက်ခံပေးပါ(၂) HERO ( မေ ) မမြင်ကွယ်ရာ ဟိုအရင်လို ငါ့ကိုပြောပါ မျှော်လင့်ချက်မဲ့(မျိုးကြီး) ယုံကြည်ပေးပါ
Flash Songs - ၂
လွမ်းရဲမှ ၀ိရောဓိ အလွမ်းဝင်္ကပါ မင်းတယောက်သာ BeWithYou ကိုယ်မညာချင်တော့ဘူး ဆွေးမြေ့အသဲ သံယောဇဉ် ချစ်သူထားခဲ့တော့ ချစ်ဦးမေ အချိန်တိုင်းပဲ နားလည်ပါ ကြယ် လွန်ပါစေအလွမ်းညတွေ လူလည်အာရှသား ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သံဃံ ကြေကွဲရလိမ့်မယ် စိတ်ကူးလွင်ပြင် KissMe မ..ကို မီးအိမ်ရှင် အလွမ်းပြေအနမ်း လွမ်းနေပြီ လွမ်းနေပါတယ် အလွမ်းနိဂုံး မင်းချစ်မှချစ်ပါ့မလား အပြုံးလေး စိုးရိမ်ရတာပေါ့ မျှော်လင့်ခြင်းအဆုံး အပြစ်တခုဖန်ဆင်း ဘ၀ရဲ့လမ်းများ ခွဲခွါခြင်းနေ့ရက်များ ငါတော့မှားပြီ ကိစ္စမရှိဘူး မင်းနဲ့မဆုံသ၍ တို့နှစ်ယောက် ပျော်ပါစေ ဖက်ထားမယ် မ-မရှိတဲ့နေ့ရက်များ တွဲလက်များ ဒီကောင်မလေးအတွက် ရှင်သန်ခြင်းပြဇတ် ရွှေရောင်အရှုံး (အိမ်) နင်သိရဲ့လား နေညိုရင်၂ ငါ့ရဲ့အနား ခိုင်မြဲသောအချစ် ငါ့ရဲ့လမင်း ချစ်လို့ရရန် အလွမ်းပြေအနမ်း၂ မင်းလိုက်ရဲပါစေ သူငယ်ချင်းချစ်သူ အင်းယားလမ်းကပန်းဆိုင် သတိရရ-မရရ အဖြည့်ခံချစ်သူ တိတ်တခိုး နင်မလိုချင်လဲ လမ်းပျောက်ချိန် အလွမ်းကဗျာ အေးဆေးဖြစ်သွားပြီ မညာပါနဲ့ ချစ်သူလေး ညလေပြေ အိနြေ္ဒရှင်မလေး မုန်းဖို့လွယ်တယ်မေ့ဖို့ခက်တယ် လေပြေ၂ တဖက်သတ်အလွမ်း ဝေးပြီးတဲ့နောက် မနဲ့မောင် ချစ်တယ်
မြန်မာတို့သိသင့်သော ဘိုးတော်ကြီးများ
သဟာယ ဆရာတင် ၂ (မျိုးချစ်တေးဂီတ ပညာရှင်ကြီး)
သဟာယ ဆရာတင် ၁ (မျိုးချစ်တေးဂီတ ပညာရှင်ကြီး)
တို့ ဗမာအစည်းအရုံး သမိုင်းစာအုပ်ကြီး
သခင်ထွန်းလွင် ( ဗိုလ်ဗလ )
၁၉၃၀ ခုနှစ် တစ်ဝိုက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သမိုင်းတစ်ချို့ 
လူထုစိန်ဝင်း ( သခင်စိတ်တွေ ပြန်လည်နိုးကြားလာစေဖို့)
မန်လည်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပညာအပေါင် နှလုံးသာချို မောင်သာချို
စာဖတ်ခြင်းကြောင်း အများအကျိုး အသက်ကိုစတေး သယ်ပိုးခဲ့ကြသူများ
၃၈ဖျာ မင်္ဂလာ တရား
လူထုစိန်ဝင်း ရဲ့သားကောင်းမိခင်
သခင်အုန်းမြင့် နှင့် အင်းစိန်ထောင် မှ နေ့ ရက်များ
သခင် ထွန်းအုပ် ( ရဲဘော်ထွန်းအုပ် )
သခင်ဗစိန် (သမိုင်းတစ်ခေတ် မှ)
သခင်မြ ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် အကျဉ်း (၁၈၉၇ - ၁၉၄၇)
လူထုစိန်ဝင်း ရဲ့လောကအမှန်တရား
လူထုစိန်ဝင်း ရဲ့အိုးဝေသံကြူး ခွပ်ဒေါင်းမြူးစေ
အရင်းစစ်တော့ စံနစ်တစ်ခုလုံး ပြုပြင်ရမှာ (လူထုစိန်ဝင်း)
ဦးသန့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် အကျဉ်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် အကျဉ်း
လူထုဒေါ်အမာ ရဲ့ကိုရေးအကျဉ်း
ဦးရာဇာတ် ရဲ့ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
လူထုသတင်းစာ အကြောင်း သိကောင်းစရာ
သခင်မြ အကြောင်း ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်
လူထုဒေါ်အမာ ( ၁၉၁၅ - ၂၀၀၈ )
မြန်မာမလေးတို့ ရဲ့မြန်မာဝတ်စုံ ( လူထုဒေါ်အမာ )
ကိုဗဟိန်းသို့စကားကြွေး မှတ်စု (လူထုဒေါ်အမာ)
ဘုန်းဘုန်း တာ့တာ (လူထုဒေါ်အမာ)
ကိုဗဟိန်း (သို့ ) ကိုထွန်းကျော်အောင် သမိုင်း
၈၈ ကျောင်းသား တို့ ရဲ့အလံ
ဦးနေ၀င်း ရဲ့မှတ်စုများ
အမှန်တရား အတွက် တိုက်ပွဲဝင်သူများ
ဒီမိုကရေစီ ရဲ့အနှစ်သာရ အဓိပ္ပါယ်
မထင်မရှား နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားလေး တစ်ဦး
၁၉၅၀ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု သမိုင်း
၁၉၈၈ ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုများ
၁၉၈၈ မြင်ကွင်း ( ပြည်လမ်း မြန်မာ့အသံ အရှေ့)
ပြည်ထောင်စု ဗိသုကာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြောင်း
မင်းကိုနိုင် ရဲ့အဗျားလေး တစ်ပုဒ်
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် မှတ်တမ်းလေး တစ်ချို့ 
၁၉၆၂ ကျောင်းသား သမိုင်း
ဦးဇောတိက ရဲ့လူ့ အခွင့်အရေး
မင်းကိုနိုင် (သို့ ) နိုင်ငံရေး သူရဲကောင်း
အလံနီကို လေ့လာချက် (သခင်သန်းထွန်း)
ဗိုလ်မှူးလက်ျာ မြန်မာ့ သမိုင်း
လူထုစိန်ဝင်း မိန့် ခွန်းများ
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် ခေါင်းဆောင် နေ၀င်း
ဦးကျော်ငြိမ်း နှင့် ဦးနေ၀င်း အကြောင်း ၁
ဦးကျော်ငြိမ်း နှင့် ဦးနေ၀င်း အကြောင်း ၂
နေ၀င်း ရဲ့မိန်းမအရှုပ်တော်ပုံ
နန်းမတော် မယ်နု သမိုင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့ဂုဏ်သတင်း
အနော်ရထာ (အရည်းကြီး ၀ါဒကို သုတ်သင်ခဲ့သူ)
တပ်မတော် အစ တို့ ဗမာ အစည်းအရုံးက
သခင်တွေရဲ့ နိုင်ငံ (သခင်နိုင်ငံ)
သခင်မြ (သို့ ) မြေအောက်တော်လှန်ရေး ဖခင်
သခင်မြ ရဲ့ဖြတ်ထိုးဥာဏ်
သခင်မြ ရဲ့မိန့် ခွန်းများ
တို့ ဗမာ အစည်းအရုံး သမိုင်းစာအုပ်
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ (လွတ်လပ်ရေး မီးရှူးတန်ဆောင်)
Blog နည်းပညာရပ် အထွေထွေ
Computer & Internet E-Mail နည်းပညာရပ်များ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အမှတ်တရ မိန့် ခွန်းများ
ကျန်းမာရေး အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Blogspot အလွယ်ကူဆုံး ထူထောင်နည်း
Wordpress Website ထူထောင်နည်း
စိတ်ပညာရပ် နှင့် ကျင့်စဉ်
facebook cartoon စုစည်းမှု
Computer & Internet Email
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ မိန့် ခွန်းများ
Track 1 - Download
Track2- Download
Track3- Download
Track4- Download
Track5- Download
Track6- Download
Track7- Download
Track 8 - Download
Online E-Book များ ၁ ငယ်အချစ် အနှစ်တစ်ရာ (ဒဂုံရွှေမျှား) စောရသက်ပြင်း (ဒဂုံရွှေမျှား) ညမဖတ်ရ (သို့ မဟုတ်) သွေးစုပ်ရေဂါ (ဒဂုံရွှေမျှား) စိတ်ပြောင်းကိုယ်ခွါ (ဒဂုံရွှေမျှား) ထမင်းလုံး တစ္ဆေ (ဒဂုံရွှေမျှား) ဂြိုလ်မွှေတဲ့ ပန်းတခေါင်း (ဒဂုံရွှေမျှား) သင်္ဘောပျက် ခရီးသည် ခုနစ်ယောက် (ဒဂုံရွှေမျှား) လက်မတင်ကလေး (ဒဂုံရွှေမျှား) သူယောင်ရုပ် (ဒဂုံရွှေမျှား) ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်သူ (ဒဂုံရွှေမျှား) ရှက်ပြုံး (ချစ်စံဝင်း) ရဲဘော်သုံးကျိပ် (ကျော်ငြိမ်း) စာဖတ်ခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး-၁ (ဇင်သန့် ) စာဖတ်ခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး-၂ (ဇင်သန့် ) စာဖတ်ခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး-၃ (ဇင်သန့် ) ဆင်းရဲသောဖေဖေ ချမ်းသာသောဖေဖေ (ညီသစ်) သူတို့ အမြင် သူတို့ အတွေး (ပါရဂူ) လူသုံးကုန်ပစ္စည်းရောင်းသူများ (ဖေမြင့်)
Online E-Book များ ၂ ဆင်သင်္ချိုင်းရှာပုံတော်နှင့်အခြားဝတ္တုတိုများ (ဖိုးကျော့) ပင်လယ်ကျား၊အဏ္ဏ၀ါမီးစုန်းများနှင့်အခြားဝတ္တုတိုများ (ဖိုးကျော့) (တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်) မီးပြတိုက် (ဆောင်းဝင်းလတ်) နံနက် ၂နာရီ (ဆောင်းဝင်းလတ်) ဆူးကလေးဆူးတယ် ခူးမယ် (ဆောင်းဝင်းလတ်) တစ်သက်တာ မှတ်တမ်း အတွေးအခေါ်များ (ရွှေဥဒေါင်း) မြတ်သက်မော် (ရွှေဥဒေါင်း) ခေါင်းတုံးပေါ် ထိပ်ကွက် (ရွှေဥဒေါင်း) ရတနာပုံ (ရွှေဥဒေါင်း) ခရီးထွက်ရန် စီစဉ်ကြခြင်း ဘ၀တစ်ခု အမှတ်တရ (ဆွေမင်း-ဓနုဖြူ) ကာလီဒေ၀ီ (အောင်ခန့် ) လက်သုံးတော်ဓါး (အောင်ခန့် ) နေဘုရားတော် (အောင်ခန့် ) အနှစ် ၃၀ (ချစ်နိုင်း-စိတ်ပညာ) သိပ္ပံမှသည် သစ္စာဆီသို. (ချစ်ငယ်) မဟာသေနာပတိ (ချစ်ဦးညို) လင်္ကာဒီပချစ်သူ (ချစ်ဦးညို) ကိုးမရှိတဲ့န၀င်း (တာရာမင်းဝေ) ကိုယ့်လက်နဲ့ ဖမ်းတဲ့နဂါးငွေ့ တန်း (တာရာမင်းဝေ) ကောင်းကင်အကြွေ ကောက်တဲ့လက် (တာရာမင်းဝေ) မှောဆရာရဲ့ ကျောင်းစာအုပ် (တာရာမင်းဝေ) အရှေ့ မြို့ ရိုးမှ မိုးစက်ကလေးများ (တာရာမင်းဝေ)
Current Transformrt (CT) အကြောင်း လေ့လာရန်
Power Supply အကြောင်း
ဒူဘိုင်း Healthy Care City (ဗဟုသုတ လေ့လာရန်)
Water Cool Chilled Plant Efficiency & Green Mark Program အကြောင်း
Water Pipe Size အကြောင်း
Green Certification (USGBC's LEED / Sibgapore Green Marks ) အကြောင်း
Chilled Water Fan Ciol Unit (FCU) အကြောင်း
Electrical Power Distribution System in Building အကြောင်း
Scope of M&E in Building ( M&E နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ အကြောင်း)
Automatic Control System in Building အကြောင်း
EETV Value တွက်နည်း
Quantity Surveyor (QS) အကြောင်း သိကောင်းစရာ
HVAC အကြောင်း အခြေခံ လေ့လာရန်
HVAC Pipe Size & Duct Size အခြေခံ တွက်နည်း
MEP အတွက် VBA (Virtual Basic for Application) တွက်နည်း
HVAC Duct Size ရွေးချယ်နည်း
Electrical Power Wiring Installation အကြောင်း
အထပ်မြင့် အဆောက်အဦးများ အတွက် M&E Design
Water Sanitation System အကြောင်း
M&E ဆိုတာ ဘာလဲ
Pipe Fitting & Water Sanitation System အကြောင်း
Auto-CAD အကြောင်း (Singapore)
Motor Control အကြောင်း (E-Book များ)
Generator / Dynamo အကြောင်း
Theory of Electrical Power (EP)
AC Induction Motor အကြောင်း ၁
AC Induction Motor အကြောင်း ၂
Chiller အတွက် Pump ကို ရွေးချယ်တပ်ဆင်နည်း
Energy Efficiency Index (EEI) အကြောင်း
Cooling Coil Air Handling Unit (AHU) အကြောင်း
Heat Exchanger အကြောင်း ၁
Heat Exchanger အကြောင်း ၂
Heat Exchanger အကြောင်း ၃
Variable Air Volume (VAV) အကြောင်း
VAV Box Size ရွေးချယ်နည်း
Green House Effect & Global Warming အကြောင်း
Lift ဓာတ်လှေခါး အကြောင်း
Motor ဗို့ အားမညီမျှခြင်းများ
Cooling Tower အကြောင်း အခြေခံ လေ့လာရန်
Motor Calculation မော်တာတွက်နည်းများ
Motor Insulation အကြောင်း
မော်တာစွမ်းရည် တွက်နည်း ( Motor Efficiency Calculation )
Motor Energy Losses များ အကြောင်း
Motor Name-Plate ဖတ်နည်း
လျှပ်စစ်မော်တာ အကြောင်း (AC Induction Motor)
High Rise Buildin Design အကြောင်း (M&E Design)
Chiller Water System Design အကြောင်း
Over-View of Chiller System အကြောင်း
HVAC Control System အကြောင်း
Wet Building Temperature (For ACMV)
Fan Curve အကြောင်း (For ACMV)
Smoke Control System (Design Consideration & Overview)
Solar Panel များ အကြောင်း
Pump Heat တွက်နည်း (For Chiller)
Dynamic Losses တွက်နည်း
Centralize of ACMV System Knowledge
Friction Losses in Piping အကြောင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံများ
နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ
ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ - email: sawya.xx@gmail.com ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျား. Picture Window theme. Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.